Chivabvu 30, 2018 arun
Kraken Daily Market Mushumo 30.05.2018
$180M vaitengerana mhiri misika zvose nhasi
Shanyira chidimbu About pamusoro Blog yedu ruzivo pamusoro Kraken Daily Market Report pano
vatevedzere mutemo German vakagamuchira $ 14M pakutengesa vakabata cryptocurrency
Vakuru German vachangobva akaita kumativi $10 miriyoni kubva kutengeswa Bitcoin kuti vakabata mune mhosva kuferefeta. wo, vakaita zvimwe $4 miriyoni kubva kutengesa zvimwe cryptocurrencies.
The cryptocurrencies zvakatengeswa zvaisanganisira 1,312 BitCoins izvo kunyanya dzakatorwa pane crackdown pamusoro papuratifomu rinonzi LuL.to, izvo zvisiri pamutemo aitengesa copyrighted eBook uye audiobooks yakaderera chaizvo mitengo. Nzvimbo yakanga yakabatwa uye makavhara wokupedzisira June, dzaishandisa ayo vakasungwa uye ayo zvinhu vakapinda mari kuti yemanyorero rakashandiswa mapurisa resourcing.
The Kutengeswa kwakaitika pamusoro vaviri mwedzi, mune dzinotevedzana kupfuura 1,600 kwema ari German cryptocurrency wokutengesera papuratifomu.
AIgatha crowdsale musi yave zvakaziviswa
AIgatha crowdsale chinotanga 5. Jun 2018. AI Service Platform Pachishandiswa Consensus System
AIgatha yave kutanga richiparadzirwa computation uye chakagadzirwa ungwaru kwemakore anopfuura makore, akawanda ayo anechekuita mune zvedzidzo tsvakurudzo. Zvino sangana nazvo blockchain kuumba mumwe idzva Michina yose. Tave kuita achiedza popularize yakakwirira Michina, yokusimbisa vanhu vachikwanisa kuzadzikisa creativities, pakugonesa mhenyu unhu vanhu, uye boosting kukura pose yebudiriro.
331 Japanese crypto vanoita vakazivisa $ 1M kana kupfuura purofiti mu 2017
The National Tax Agency kuti Japan yakashuma kuti 331 kubva 549 munhu crypto vanoita vakanyorwa vawana kupfuura 1 mamiriyoni emadhora nekutengeserana rakapotsa mari mu mubereko.
The mutero chikwata mutariri kuferefeta akati kuti 2017 crypto zvokutengeserana mabasa pamwe Bitcoin bhizimisi purofiti kuti vavandudze muJapan GDP ne 0.3%
Zvakakanganiswa Сrypto makambani. mhosho 1
Regai kudzidza Сrypt ...
$20M Eteri hacked ja ...
Previous Post:Chii cryptocurrency vari vanoita zano kutengesa, uye izvo munhu kuchengeta?
Chikumi 10, 2018 pa 2:37 AM